Hidden Dash Eme Ikhamera
Shenzhen TryAce Technology Co., Ltd ingenye abakhiqizi eziholela zokuhlanganisa-R & D, ukukhiqiza kanye yokuthengisa ezimbili dash cam, 4k dash cam, WiFi dash cam, ezincane dash cam, kufihlwe dash cam, esibukweni ikhamera ....
Sisethe iqoqo control izinga uhlelo, Njengamanje, sinalo ezingaphezu kwezingu-10 QC abasebenzi, futhi ngokuqinile ukugcwalisa imikhiqizo ISO9001.Our honored izitifiketi CE, FCC, CCC, RoHS, futhi IP68. Sine kweminyaka engu-15 ukuthekelisa isipiliyoni, nokunikeza ngamasevisi okwandisa OEM kanye ODM Ama-oda e Melika, eYurophu, eNyakatho Melika nase-mpumalanga ye-Asia. Futhi ukuhweba ithimba lethu ilungele ukuba ngikukhonze.
"Owenza ezivamile ukuba into engavamile" kuyinto umbono zokuphatha siphikelela futhi afeze phambili. Ngesikhathi esifanayo, it is a umgomo wonke umuntu TryAce olandela. Sikholelwa: In imvelo esifiselekayo ukuze bakha umphakathi obunobunye futhi ukuphepha China futhi ne ukusekelwa nesikhuthazo esiluthola inqwaba amakhasimende TryAce oluqotho kanye zonke izizinda zokuphila, thina, njengoba lesi sishoshovu fresh, surely ukuzitika ngokugcwele ngento inhlokodolobha, ubuchwepheshe, ithalente nokuphathwa kufanele nesibindi ukuhlola kanye innovating imikhiqizo emisha, okwenza iminikelo ngaphezulu uphilele nekusasa elingcono wezwe lakithi nokuphepha traffic emhlabeni.